Ụbọchị My Pet » Ajụjụ ise Online Daters na ike gwụrụ nke anụ
emelitere ikpeazụ: Nov. 26 2020 | 3 min agụ
N'ụwa ebe ihe karịrị otu nke atọ nke alụmdi na nwunye na-amalite online, otu ga-eche na-akpa n'elu Internet ga-ndị dị otú ahụ a ike echiche ịghọta.
Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-ka mgbagwoju anya site malite a mmekọrịta online na ọ bụghị na mpaghara mmanya idaha ma ọ bụ na ihere enyi-nke-a-enyi melite.
Nke a echiche na-eme ka ochie ọchịchọ ịmata, nke na-eme ka ha jụọ ajụjụ. Ebe a na-nanị ole na ole anyị dị njikere ịla ezumike nká na ìsì ụbọchị na-alụbeghị di na tebụl.
Gịnị ma ọ bụrụ na onye na-enyo na-a na-egbu ọchụ? Mgbe ahụ, nke ga-inu. Otú ọ dị, Gịnị ma ọ bụrụ gị ịrịba ama ndị ọzọ na-enyo na-a na-egbu ọchụ? Ma ọ bụ a weirdo? Ma ọ bụ nwere ụfọdụ rụrụ arụ na osisi mkpụrụ osisi? Nke ahụ bụ ihe mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ: na-enwe olileanya onye nke ọzọ abụghị a-emetụta akparamàgwà mmadụ.
Ị na ị na-ahụ ya na-abụghị onye? N'eziokwu, nke a bụ otu n'ime ndị kasị-ezighị ezi nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Mgbe mmadụ na-akpata a keyboard, ha na-eche a otutu obere mgbali, nke na-ahapụ ha n'ezie imeghe. Ọ bụ zuru ezu na-abụghị nke na-agba mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na oge ị izute ihu na ihu, niile obere okwu bụ maka nnụnụ! Anyị nwere mgbe niile iji nweta ala-achị na ihe n'ezie na awụgharị na ihere banter.
Gịnị ma ọ bụrụ na ha adịghị ele anya dị ka ha na foto? Na mbụ, M nwere ike na-ekwe nkwa na mgbe ha na izute m na agaghị m enwu gbaa si ntị ntị ke zuru okè ọkụ, nke bụ ihe m na-atụ aro foto m anya dị ka. Nke ahụ bụ ihe photos bụ maka. Ọ bụrụ na ha si na-ejisike otu onye ha na foto, M nwere ike na-atụ anya ha àgwà ọkụ ozi mere ka m bịarukwuo izute ha. Ọ bụrụ na onye anyị na-mmasị ka ụgha banyere ndị ha bụ, Otú ọ dị, red flags ga-gbapụta n'ebe nile.
Ị na-achọsi ike? Ọ bụghị ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ obere sikwara ike njite karịa onye ọ bụla ọzọ na-achọ ịhụnanya. Single ndị niile bụ ndị iwe na-ewe, olileanya, ndidi na frantic, na-adịghị anyị? The ala akara bụ: ọ bụghị dị ka mfe izute ndị si n'ebe ọzọ. Ọ bụ na-adịghị mfe gaa nnukwu ụlọ ahịa, ma na ihe mere na anyị na-azụta ákwà anyị online!
Gịnị mere agaghị ị dị nnọọ ka m meere unu na onye? N'ihi ìsì ụbọchị na n'ọtụtụ ebe a maara dị ka jọgburu onwe. Dị nnọọ n'ihi na ndị enyi anyị dị ka onye, apụtaghị anyị ga na-enwe ndị ọzọ na-tụkwasịrị bụrụ na nke ọdachi na-eme ka ihe niile njọ.
Olee otú ị pụrụ n'ezie ga-esi mara onye online? N'otu ụzọ ahụ m maara ihe nile nke enyi m si mmasị Mmekọahụ na City ji, nwanne mama m mammogram pụta na m ochie prọfesọ si eke mụrụ atụmatụ. Na nke a ụbọchị na afọ, anyị na-ihe nile n'elu Internet. Anyị na-na aka online, anyị nweghachi online, anyị ikpoputa ọ bụla ikpeazụ-adịghị ụtọ zuru ezu nke ndụ anyị online; ọ bụ naanị nri anyị na-ahụ ịhụnanya e nwere oke.
Ọ bụghị ya ọnụ? Ọ bụghị ma ọ bụrụ na ị na-eme ya. E nweghị ihe mere inwe a nde dị iche iche profaịlụ circling na web. Chọta a na saịtị na-arụ ọrụ n'ihi na ị, banye na-akwụ ụgwọ ha. M na-ekwe nkwa ya niile ga-ejedebe ịbụ ọnụ ala karịa karịa uwe ọhụrụ na ị zụta maka aga, ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na i nwere ịzụta onwe gị na-eche onye na-enye, wdg.
Emela ị chọrọ izute ndị nkịtị ụzọ? Edinam akpanikọ. Chere. Ọ bụ 2014? Nke a bụ nkịtị ụzọ!
Ịnagide ndị na onye dịghị mgbe a ga gburu kwụsịrị menu. Dị nnọọ n'ihi na anyị na-ahọrọ ụbọchị online pụtaghị na anyị na-eyi mepere ndị fọdụrụ nke ụwa.
Ma mkpụrụ obi anyị ma ọ bụ nwunye bụ a click pụọ ma ọ bụ a ngọngọ pụọ, anyị dị nnọọ chọrọ ada madly ịhụnanya na. Ọ dịghị ajụjụ banyere ya.
Ihe ọ bụla na-Zere on Mbụ Ụbọchị